Kutengesa uye Kushambadzira Iye zvino Akaundi ye48% yeiyo Corporate IT Budget | Martech Zone
Kutengesa uye Kushambadzira Iye zvino Akaundi ye48% yeCorporate IT Budget
Chishanu, December 19, 2014 Chishanu, December 19, 2014 Douglas Karr
Isu tanga tichinzwa izvi kwechinguvana, asi zvichiri kukosha kuti makambani azive chokwadi chekuti kushambadzira mabhajeti kuri kuchinja. Makambani anoenderera mberi nekudyara muhunyanzvi hwekushambadzira kubatsira kwavo kutora, kuchengetedza, uye kusimudzira mazano pasina kuwedzera zviwanikwa zvevanhu. Ipo kudyara kweIT kunonyanya kuve kuchengetedzeka uye njodzi yekudyara - mune mamwe mazwi, "inofanirwa" - kushambadzira mari inoramba ichida kudzoka pane kudyara uye kuongorora kwakazara.
Kunyangwe maCIO achiri kutungamira nzira maererano nekudyara kweIT, vatengesi vari kubata nekukurumidza. Bhizinesi-rinotungamirwa IT kushandisa maakaundi e40% emabhajeti eCIOs, zvinoenderana nedata razvino nekambani yezano yeECB. Pamusoro pekushandisa izvi, kushambadzira kunopa 25% yebhajeti yayo kune tekinoroji uye kutengesa kunogovera 23%. Direct Kushambadzira Nhau
Joe Staples, CMO pa AtTask, webasa manejimendi manejimendi software kumakambani ekushambadzira eese saizi, akagovana pfungwa dzake pane izvo zvinoreva hunyanzvi hwehunyanzvi hwevatengesi:
Tekinoroji haigare iri panacea: vatengesi vekutengesa vanogona kurerutsa tekinoroji mutengo uye njodzi paunenge uchifungidzira zvakanakira zvimwe zvigadzirwa zvitsva.
Kwemakore mazhinji emakambani IT yakawira mumusungo wekuyera kubudirira maererano ne-nguva, pa-bhajeti kuunzwa kwehunyanzvi hutsva, ichiregeredza kana kugona kwacho kuchigadzira kukosha. Vatengesi vekutengesa vanofanirwa kungwarira musungo mumwe chete: kana tekinoroji ikasagamuchirwa zvinobatika, vashandi vanogona kutadza kushandisa zviwanikwa zvakawanikwa nemhinduro yako nyowani. Iwe unofanirwa kudzivirira pasi-kuisa mari mukushandisa uye gara uchifunga nezvevashandi hunyanzvi nzvimbo.
Vaka mhinduro dzekubatsira vashandi kugovana nekuvandudza matekinoroji - Zvichienzaniswa nekambani yeIT, vashandi vekushambadza vangangowana mhinduro dzakanakisisa dzekushandira pamwe nekushanda zvine mutsindo, asi kazhinji havagovane izvi zvakawanikwa nehunyanzvi timu yavo. Kukunda izvi, vatungamiriri vekutengesa vanofanirwa kuratidza matekinoroji anoonekwa nevashandi vavo.
Tags: AtTaskmukuru wezve ruzivoNdizvozvoyakananga kushambadzira nhaujoe chikafukushambadzira bhajetibhajeti rekutengesatekinoroji bhajeti
Kukwira kweMazuva Ano Mobile Mufambi